YEYINTNGE(CANADA): Friday, April 13
မအေးယုအောင်၏မိခင်ဖြစ်သူဒေါ် ကြူကြူမှ တရားစွဲရန် စိတ်ဆန္ဒရှိ
တရားသူကြီး အောင်ဖုန်းဝင်းနှင့် ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ဖြူဝင်းသက်တို့မှ အိမ်ဖော်မလေး မအေးယုအောင်အား ယခုအချိန်ထိ မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ကြူကြူထံ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခြင်းမရှိသေးသည့်အတွက် မိခင်ဖြစ်သူမှာ သမီးအတွက် စိတ်ပူနေရပါတယ်၊ သမီးဖြစ်သူမအေးယုအောင်နှင့်မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ကြူကြူကို ရန်ကုန်မြို့ မှာ တစ်နာရီခန့်သာ ပေးတွေ့ခဲ့ပါတယ်၊ ပေးတွေ့တဲ့အခါမှာလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးတွေ့ခြင်းမရှိပဲ၊ မိခင် ပြန်ခေါ်သွားမည်ဟု ပြောဆိုသော်လည်း ပြန်မထည့်ပေးပါ၊ တရားသူကြီးလင်မယားမှ လကုန်မှပြန်ပို့ပေးမည်ဟုသာ ပြောပါသည်၊
အမှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီ မိခင်ဖြစ်သူဒ်ါကြူကြူမှ တရားစွဲရန် စိတ်ဆန္ဒရှိပါသဖြင့် လမ်းပြကြယ်အဖွဲ့မှ အမှုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သည့် အမှုလိုက် ရှေ့ နေအပါအ၀င်နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များကို ကူညီဆောင်ရွတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 4/13/20120အကြံပြုခြင်း
လူရွှင်တော် မေတ္တာတို့အဖွဲ့ သင်္ကြန်မဏ္ဍာပ်များတွင် သံချပ်နှင့်ဖျော်ဖြေ
အာဏာပိုင်များ ခွင့်ပြုခြင်းမရှိ၍ တိမ်မြုပ်နေသော မြန်မာ့ဓလေ့ သံချပ်ထိုး ဖျော်ဖြေမှုကို ယခုနှစ်မဟာ သင်္ကြန်ကာလတွင် ပြန်လည်ခွင့်ပြု လိုက်ပြီဖြစ်ရာ လူရွှင်တော် မေတ္တာတို့အဖွဲ့က သင်္ကြန်မဏ္ဍာပ်များကို သွားရောက်ဖျော်ဖြေ တင်ဆက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးမေတ္တာက ပြောကြားသည်။
မူလက သံချပ်ထိုးမည့် အဖွဲ့များ သံချပ်စာသားများကို စိစစ်ရေးသို့ ကြိုတင် တင်ပြရမည် ဟုထုတ်ပြန် ထားသော်လည်း ယခုတင်ပြရန် မလိုကြောင်း၊ ၎င်းနှင့်အတူ လူရွှင်တော် ဗေလုဝ၊ ကုသိုလ်တို့ ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကရှင်းပြသည်။
၎င်းတို့အဖွဲ့မှာ မဟာသင်္ကြန် ကာလအတွင်း ရန်ကုန်မြို့တော်ရှိ နာမည်ကြီး သင်္ကြန်မဏ္ဍာပ်များ သို့သွားရောက် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့ထံမှသိရသည်။
မန္တလေးလူရွှင်တော် များကလည်း ယခုနှစ်သင်္ကြန်တွင် သံချပ်ဖြင့် ဖျော်ဖြေရန်စီစဉ် ထားကြောင်း မန္တလေးဒေသခံများ ထံမှသိရသည်။
ဓါတ်ပုံ Eleven Media Group
ဒေါ်စုနဲ့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချူပ် သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ရှင်းလင်း
ဒေါ်စုနဲ့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချူပ် သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ရှင်းလင်းစဉ်
(ပ်ိတ်ဆို့တာတွေ ခန နားမယ်...သဘောထားတင်းမာသူတွေ ဂကြိုးဂကြောင်ထလုပ်ရင် ပိတ်တာဆို့တာတွေ ပြန်လာပါမယ်တဲ့ ...Lift မဟုတ်ဘူး suspension ပါတဲ့)
"Of course we must respond with caution, with care. We must always be sceptical and questioning because we want to know those changes are irreversible. But as we've discussed, I think it is right to suspend the sanctions that there are against Burma, to suspend them, not to lift them, and obviously not to include the arms embargo." BRITISH PRIME MINISTER DAVID CAMERON
"This suspension would have taken place because of the steps taken by the president and other reformers and it will also make it quite clear to those who are against reform that should they try to obstruct the way of the reformers, then sanctions could come back." (Daw Aung San Suu KYi)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချူပ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်
"This is just one election but if the people get the idea that we have to be involved and that is something important for the future. You have come at just the right time." (Daw Suu)
Published on 13 Apr 2012 by mizzimanewsTV
ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချူပ် နဲ့ ရွေတိဂုံ
ကဲ ကဲ လန်ဒန် နဲ့ နေပြည်တော်တို့ တွေ့ကြပါပြီ...အတာပွဲမှာ ဆုံတွေ့ကြရာ.. (ဘာတွေထူးလဲတော့မသိ)
မိုးမိတ်နားက သစ်တွေတရုတ်က ခိုးလို့ကုန်ပြီ
နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေကို တစ်ခုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်သမျှ တရုတ်နဲ့ မပတ်သက်ဘဲ နေပေးကြပါ ဆိုတာပါဘဲ။ မြန်မာပြည်ထဲက သစ်တွေကုန်ပြီ၊ ကျောက်စိမ်းတွေကုန်တော့မယ်။ သထ္ထုသန့်စင်တယ် ဆိုပြီး ယူရေနီယမ်လို သထ္ထုပါ ခိုးနေတယ်။ မြန်မာပြည်က ရေတွေလည်း အဆိပ်သင့်လို့ အချို့နေရာ ငါးတွေပါ မရှိတော့ဘူး။ မြို့ပေါ်တွေက မြေယာတွေကိုလည်း သူတို့ ဈေးကစားလို့လည်း အခုဆို ခေါင်ခိုက်နေပြီ၊ မြန်မာတွေ အနားမကပ်နိုင်တော့ဘူး။ မြန်မာမလေးတွေကို တရုတ်ပြည်ကို သွင်းတယ်၊ ဒီကိုလာပြီး မြန်မာစကားမတတ်တဲ့ တရုတ်က မြန်မာမတွေကို မယားငယ်လုပ်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်း အတွက် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး ၊ နယ်ပယ်အသီးသီးမှာ လုပ်လို့ရသလောက် အကုန်လုပ်နေပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ယုတ်မာချက် လုပ်ဆောင်ချက်တွေက ကမ်းကုန်နေပါပြီ။ တရုတ်ကြောင့် ကောင်းစားတာ လူတစ်စုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အတွက် ဖြစ်နိုင်သမျှ တရုတ်နဲ့ မပတ်သက်ဘဲ နေပေးကြပါဗျာ....
အဲဒီမှာ သစ်လာဝယ်တဲ့တရုတ် တစ်ယောက်ရဲ့ လူယုံကိုပြောတာ "သစ်ကိုဝယ်တာမဟုတ်ဘူး ရာဘဆေးပြားနဲ လှဲပြန်တာတဲ့" ကောင်းကြသေးရဲ့လားဗျာ။ ဆေးကို သစ်ခုတ်သမားတွေဆီ ပြန်ရောင်းတာလေ အမြတ်တွေ အများကြီးရတယ် သစ်ခုတ်ခ ရပြီးတဲ့အပြင် ရာဘ ဆေးအတွက် အမြတ်ပါယူသွားတယ်လေ ခု "ဖြိုးစည်သူကုမ္မဏီ" က အဲဒီမှာခုတ်နေတာ ကျွန်းသစ်တွေကောဘဲ ခိုးတာဖြစ်နိုင်တယ် ကျွန်းသစ်ကတော့ တရားဝင် ပါမစ် မရလောက်ဘူး၊ နောက်မှကုမ္မဏီခုတ်ထားတဲ့ ပုံတွေအများကြီး တင်လိုက်မယ် အကိုရေ။
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းခြင်းထက် ဆိုင်းငံ့ထားရန် ဗြိတိသျှ ၀န်ကြီးချုပ်ပြော
ဧပြီ ၁၃ ရက်၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်-YPI
by Yangon Press International on Friday, April 13, 2012 at 11:49am ·
၁၈ နှစ်အောက် လူငယ်တစ်ဦးပထ၀ီဓါတ် ယူနေစဉ်
ကန်တော်ကြီးမျှော်စင်ကျွန်းရှိ IC မဏ္ဍပ်အနီးတွင် ယနေ့ညနေ ၅း၄၅ ခန့်က ရန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သော်လည်း အထိအခိုက် ဒဏ်ရာရမှုများမရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၆(ဂ)မှာပါတဲ့ “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပါမယ်” ဆိုတဲ့စာသားနေရာမှာ “ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရေး” ဆိုတဲ့ စာသားနဲ့ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်တဲ့အကြောင်း ၂၀၁၁ ခု နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်ထုတ် မြန်မာသတင်းစာတွေမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုထုတ်ပြန်လို့ မှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ်...
နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေ ပုဒ်မ ၆(ဂ)မှာပါတဲ့ “ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာရေး” စာသားကို အန်အယ်ဒီက လက်ခံခဲ့ပြီးမှ အမတ်သစ်တွေ ကတိသစ္စာပြုတဲ့အခါ “ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများကိုလည်း လိုက်နာပါမည်” ဆိုတဲ့ စာသားကို ကျမ်းကျိန်ရရင် အန်အယ်ဒီက လက်မခံနိုင်ပါ။
“ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာပြီး နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေများကိုလည်း လိုက်နာပါမည်”လို့
မအေးယုအောင်၏မိခင်ဖြစ်သူဒေါ် ကြူကြူမှ တရားစွဲရန် စိတ...
ဒေါ်စုနဲ့ ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချူပ် သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ...
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု ရုပ်သိမ်းခြင်းထက် ဆိုင်းငံ့ထ...